Warshada mashiinka cabitaanka cabitaanka Shiinaha Energy iyo alaab-qeybiyeyaasha. Higee
Khadkeena mashiinka buuxinta cabitaanka tamarta wuxuu kudhexyaalayaa dhalada, buuxinta iyo mashiinka mashiinka hal mashiin monoblock. Saddexda geeddi-socod waxaa si toos ah loogu fuliyaa si toos ah. Buuxinta dhalada PET ama dhalada dhalada ah ama dhalada dhalada ah dhamaantood waa la habeyn karaa.
Mashiinka Buuxinta Tamarta 3 ee 1 Line Soosaarka Monobloc
Mashiinka buuxinta cabitaanka tamarta (Dhaqida / buuxinta / xirashada 3-in-1 mono-block)
Dhalada waxay galeysaa qeybta lagu luqluqdo ee mashiinka seddex-ka-mid ah iyada oo la sii marsiinayo hawo-qaadaha. Muraayadda lagu rakibay mashiinka wareega ayaa soo qabata dhalada oo waxay u rogaysaa in ka badan 180 digrii waxayna ka dhigeysaa dhalada wejiga inay dhulka dhigto. Qaybta lagu luqluqdo ee khaaska ah, mashiinka ku yaal giraangiraha buufin buuxiyo biyo si loogu maydho dhalada gudaha. Biyo raacin iyo dheecaan ka dib, dhalada ayaa rogmaysa 180 digrii iyada oo la raacayo tareenka hagaha ah waxayna ka dhigaysaa dhalada culeyskeedu inuu cirka u muuqdo. Ka dib dhalada la maydhay ayaa loo wareejiyaa qaybta buuxinta iyada oo la marinayo dhalada xiddigta dhalada. Dhalada ka soo baxda filinka ayaa lagu hayaa saxan qoorta haysa. Qalabka wax lagu buuxiyo ee ay ku shaqeyso kamaradku wuu ogaan karaa kor iyo hoos. Waxay qaadataa habka buuxinta cadaadiska. Waalka buuxintu wuu furmaa wuuna bilaabmaa buuxintiisa markuu hoos u dhaqaaqo oo uu taabto dhalada, wiishka buuxinta kor ayuu u kacayaa oo wuxuu ka tagayaa dhalada markii uu dhammeeyo buuxinta, dhalada buuxda ayaa loo wareejiyaa qaybta xarkaha iyadoo la marinayo qoorta wareejinta qoorta. Mindida ku istaagida mindida ayaa haysa dhalada, waxay si toos ah dhalada ugu haysaa wareegga. Madaxa furku wuxuu ku hayaa kacaan iyo autorotation. Waxay ku dhammaan kartaa koorso dhan oo lagu xiro oo ay ku jiraan qabashada, riixitaanka, xoqidda, ka saarista ficilka kaamka. Dhalada buuxda waxaa loo wareejiyaa qalabka wax lagu rakibo ee dhalada loo maro geedi socodka xiga iyada oo loo marayo cirifka xidigta Mashiinka oo dhan wuxuu kuxiran yahay daaqado, dhererka daaqada ku lifaaqan ayaa ka sareysa tan ugu sareysa 3 mashiin ee 1, qeybta hoose ee daaqada ku lifaaqan waxay leedahay soo celin hawo
Marka laga reebo qaabka hoose, qaybaha gudbinta iyo qaybo ka mid ah oo ay tahay in laga sameeyo agab gaar ah. Qaybaha kale ee dayactirka waxaa laga sameeyaa bir bir ah 304.
Qalabka wax lagu duubo wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah, giraanta wax lagu xidho waxay ka samaysan tahay maadada 'EPDM', caagguna wuxuu ka samaysan yahay UMPE.
Ri Garguurku wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah, meesha ay ku hayaan dhalada waxay sidoo kale ka sameysan tahay bir bir ah, marka la barbardhigo caag dhaqameedka caagga ah, waa nadaafad badan, waara, mana laha qaybo dhaqso u xirta, qeybaha dhalada dhalada iska ilaali in wasakhda ay ku dhacdo xajiyaha caaggu.
Ri Garbaha oo ku qalabaysan sanka buufinta waxtarka sare leh, wuxuu ku horumari karaa meel kasta oo ah dhalada dhexdiisa, wuxuuna badbaadin karaa biyaha mayrashada. Waxaa jira dabool korka ku xardhan buufinta buufiska oo ka hortagi kara daadashada biyaha; waxaana jira boolal dib-u-warshadeyn sharciyeysan iyo tuubooyin dib-u-warshadayn ah oo ka hooseeya hawo-mareennada.
Time Waqtiga mayrinta waxaa la damaanad qaadi karaa 2 ilbidhiqsi.
Adoo hagaajinaya dhererka qaybaha meertada ah si ay ula qabsadaan dhererka kala duwan ee dhalada
● Dhiirrigelinta waxaa laga soo qaatay nidaamka lagu riixay qaab dhismeedka lagu gudbiyay qalabka.
Bixinta biyo raacintu waxay maamushaa tuubada 'solenoid valve'.
La qaatay sumcad caan ah ka-hortagga daxalka oo aan ilaalinayn taas oo yareyn karta wasakhda buuxinta deegaanka.
Plate Saxanka wareegsan wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah oo birta ka sameysan 304, dhalista ilkaha oo ballaaran.
● Qalabka mashiinka cadaadiska waxaa lagu soo bandhigaa naqshad shisheeye oo casri ah oo leh xawaare buuxa oo degdeg ah, jeebka nadaafadda oo aan nadiif ahayn, qaybo yar oo wax lagu xiro, iyo xakamaynta heerka dareeraha saxda ah. Waalka oo dhan wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah oo aan birta ka sameysnayn.
Valve Waalka buuxinta ayaa furmaya oo bilaabaya buuxintiisa markuu hoos udhaco oo taabto dhalada, waalka buuxinta kor ayuu udhacayaa wuxuuna ka tagayaa dhalada markuu dhammeeyo buuxinta.
Supply Bixinta cabitaanku waxay korsaneysaa qalabka pneumatic automatic ee dareeraha dareeraha dareeraha si uu si otomaatig ah u xakameeyo taangiga dareeraha ah.
Bearing Bixitaanka isbadbadalka waxaa la qaatay dhalmo aan ilaalin, taas oo yareyn karta wasakhda buuxinta deegaanka. Wareejinta wareejinta oo ka sameysan bir bir ah, giraanta wax lagu xiro waxay ka sameysan tahay maadada EPDM, caagagga waxaa laga sameeyaa UMPE.
Dhiirrigelinta buuxiyaha waxaa laga soo qaatay nidaamka lagu riixay qaab dhismeedka waxaana lagu gudbiyay qalabka.
● Wadada ugu weyn waxay qaadataa gawaarida gawaarida, oo leh hufnaan sare, buuq yar, nolol dheer, dayactir sahlan, saliid ku filan, dufanku wuxuu si otomaatig ah udhigi karaa inuu udub dhexaad u noqdo, wuxuu korsadaa transducer xawaaraha mootada weyn si loo xakameeyo, mashiinka wuxuu qaataa waqtiga isbedelka talaabada-yar . Waxyaabaha loogu talagalay mashiinka oo dhan iyo jirku waa birta kaarboon oo leh bir birta ka baxsan.
● Mashiinka waxaa si otomaatig ah u kontaroola PLC, cilad ku jirta muujinta xariiqda, sida dhalada dhalada, daboolida iwm.
Parts Qaybaha muhiimka ah iyo walxaha korontada ku shaqeeya ee mashiinka ayaa qaadanaya alaabada soo dejinta.
Cutubkani waa heerka ugu sarreeya ee saxnaanta mashiinka 3-in-1, waxaa muhiim u ah mashiinku inuu si xasilooni leh u socdo iyo tayada wax soo saarka.
● Maroojinta madaxa madaxa (qaybaha ugu waaweyn ee hubin kara tayada xiritaanka), khabiirku wuxuu hagaajinayaa naqshadda birta birlabta, horumarintani waxay yareyn kartaa heerka cilladaysan ee kaabbashada si fiican iyo dabeecadda soo jireenka ah ee fudud in la dejiyo oo la hagaajiyo xaddiga xarkaha xarkaha. madaxa.
Head Madaxa wax lagu xiro waa naqshad laba-ujeeddo leh: waxay ku habboon tahay daboolka fidsan iyo daboolka isboortiga.
● Qalabka soo saari kara daboolka gadaashiisa isla markaana ka hortagi kara marinka daboolka gadaal ayaa lagu dejinayaa hagaha furka dhaca.
Of Koox ka mid ah shido-koronto-yaqaannada korantada ayaa ku degsan hagaha dhaca. Mashiinka wuu istaagi doonaa marka uusan jirin furka hagaha.
Detect Qalabka dhalada lagu galiyo ee dhalada ayaa lagu xirayaa mashiinka wax lagu xiro.
Waxaa jira nozzles aseptic inta udhaxeysa wareejinta wareejinta wareegga iyo qaybaha buuxinta si loogu mayro badeecada ku hartay qaybaha dhalada dhalada.
The Waxaa jira silsilad dabool-fur ah oo isku-xidhka u dhexeeya hagaha furka dhaca iyo saxanka daboolka leh. Waa la ogsoon yahay in aan quudin lahayn dabool.
Adoo hagaajinaya dhererka qaybaha meertada ah si ay ula qabsadaan dhererka kala duwan ee dhalada.
● Dhiirrigelinta furka furka waxaa laga soo qaatay nidaamka lagu riixo qaab dhismeedka waxaana lagu gudbiyaa qalabka.
● Qaybaha ugu muhiimsan ee furka furka waxaa ka shaqeynaya xarunta farsamaynta-koontaroolka dhijitaalka ah
Koofiyadaha furaha ayaa koofiyadaha u gudbiya mashiinka dabacsan ee dabacsan.
Waxay leedahay hawsha dhalo aan lahayn furitaan dabool, xakamayn otomaatig ah.
Waxaa jira qalab lagu baaro qalabka wax lagu baaro, marka daboolka uusan ku filneyn, qalabka wax lagu baaro ee furka fuulaya waxaa laga helayaa calaamadda ka-maqnaanshaha, wiishka daboolka ayaa bilaabmaya. Koofiyadaha taangiga waxay maraan qalabka wax lagu raro ee suunka. Waxay ku beddeli kartaa cabirka marinka taangiga sabuuradda; tani waxay hagaajin kartaa xawaaraha furka dhaca.
4. Suunka gudbinta
Hore: Khadka Mashiinka Buuxinta ee Aan Kaarboonka Ahayn
Xiga: Mashiinka Mashiinka Buuxinta kulul ee PET
Khadadka mashiinka buuxinta kaarboonka jilicsan
Khadka Mashiinka Buuxinta ee Aan Kaarboonka Ahayn